တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ်၏ ကျောက်ပန်းပုလက်ရာများ - Xinhua News Agency
ချိန်တူး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း အန်းယွဲ့ခရိုင်သည် ကျောက်ပန်းပုလက်ရာများကြောင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် နေရာဖြစ်သည်။ အန်းယွဲ့ကျောက်ပန်းပုသမိုင်း၏ အစောဆုံးကာလမှာ အရှေ့ဟန်မင်းဆက်(၂၅ ခုနှစ်- ၂၂၀ ခုနှစ်)ခေတ်က ဖြစ်သည်။ ထန်မင်းဆက် (၆၁၈ ခုနှစ်-၉၀၇ ခုနှစ်)နှင့် ဆုန့်မင်းဆက်( ၉၆၀ ခုနှစ် – ၁၂၇၉ ခုနှစ်)များတွင်မူ လက်ရာပိုမို ပြောင်မြောက်လာပြီး စုံလင်ကြွယ်ဝခမ်းနားမှုများရှိလာခဲ့ရာ ကျောက်ပန်းပု လုပ်ငန်းအထွတ်အထိပ်ကာလသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် အန်းယွဲ့ခရိုင်ရှိ မြောက်ဆုန့်မင်းဆက်(၉၆၀ ခုနှစ်-၁၁၂၇ခုနှစ်)၏ ကွမ်ရင်ရုပ်တုအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် အန်းယွဲ့ခရိုင်ရှိ ဆုန့်မင်းဆက်(၉၆၀ ခုနှစ်-၁၂၇၉ ခုနှစ်)၏ ကျောက်ဆင်းတုတော်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် အန်းယွဲ့ခရိုင်ရှိ မြောက်ဆုန့်မင်းဆက်(၉၆၀ ခုနှစ်-၁၁၂၇ခုနှစ်)၏ ကျောက်ဆင်းတုတော်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယခုအခါ အန်းယွဲ့ခရိုင်အတွင်း နေရာ ၂၃၀ ခန့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကျောက်သားဆင်းတုတော် ၁ သိန်းကျော် ရှိသည်။ ကျောက်တောင်များတွင် ပြန့်နှံ့တည်ရှိနေသည့် အန်းယွဲ့ ပန်းပုလက်ရာများကို အချိန်အတော်ကြာမြင့်သည်အထိ လူသိနည်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ မူဝါဒ၊ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုများကြောင့် အန်းယွဲ့ ပန်းပုလက်ရာများက ကမ္ဘာတွင် ပြန်လည်ထင်ပေါ်လာခဲ့သည်။ (Xinhua)
(SichuanMosaics) A glimpse of stone carving world in China’s Sichuan
Photo taken on Dec. 22, 2021 shows the stone statues of the Song Dynasty (960-1279) in Anyue County, southwest China’s Sichuan Province. (Xinhua/Tang Wenhao)
CHENGDU, Jan. 13 (Xinhua) — Anyue County in southwest China’s Sichuan Province is famous for its stone carvings. Anyue stone carving dates back to as early as the Eastern Han Dynasty (25-220). Through the Tang (618-907) and Song Dynasty (960-1279), Anyue carving developed to its peak with the features of abundant, exquisite and magnificent. Now there are more than 100,000 stone statues preserved at about 230 sites in Anyue.
Scattering in the mountains, Anyue carving was little known to the public foralong period of time. Nowadays, with the support of policies and funds, Anyue carving is revealed to the world.
Photo taken on Dec. 22, 2021 shows the stone statue of Water-Moon Avalokitesvara (shuiyue guanyin) from the Northern Song Dynasty (960-1127) in Anyue County, southwest China’s Sichuan Province. (Xinhua/Tang Wenhao)
Photo taken on Dec. 22, 2021 shows the stone statue of the Song Dynasty (960-1279) in Anyue County, southwest China’s Sichuan Province. (Xinhua/Tang Wenhao)
Photo taken on Dec. 22, 2021 shows the stone statue of the Northern Song Dynasty (960-1127) in Anyue County, southwest China’s Sichuan Province. (Xinhua/Tang Wenhao)
Photo taken on Dec. 22, 2021 shows the stone statues of the Northern Song Dynasty (960-1127) in Pilu Cave in Anyue County, southwest China’s Sichuan Province. (Xinhua/Tang Wenhao)■